Shiinaha kalluunka kalluunka iyo soosaarayaasha | Yaasiin
Shayga QUOTA HEERKA IMTIXAANKA
Budada labiska ama Dhagaxyada, Jilicsan, wax cunin
Caddaan ama budo jaale khafiif ah
Dhadhamiya oo urin
10% xalka biyaha, 25 ℃
Isukeenista Cufnaanta (g / ml)
Waxyaabaha borotiinka ah
(Qodobka beddelka 5.79)
MeHg (methyl meerkuri)
Mg 0.5mg / kg
1 0.1mg / kg
Mg 1.0mg / kg
Wadarta Tiritaanka Bakteeriyada
Caaryo & khamiir
Shaxda qulqulka ee soosaarka kalluunka kalluunka
Kolajka kalluunku waxaa nuugi kara jidhka bini'aadamka, ka qaybqaadan karaa nashaadaadyo kala duwan oo jidh ahaaneed, kaalinna ka ciyaara dib u dhigista gabowga, hagaajinta maqaarka, ilaalinta lafaha iyo kala-goysyada, iyo kor u qaadista difaaca jirka.
Iyada oo amaankeedu sarreeyo ee alaabta ceyriinka ah, nadiif ahaanta sare ee borotiinka iyo dhadhanka wanaagsan, kalluunka collagen waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshado badan, sida kaabayaasha cuntada, alaabada daryeelka caafimaadka, qurxinta, cuntada xayawaanka, dawooyinka, iwm.
1 Sup Kabka Cuntada
Kalluunka loo yaqaan 'Collagen Peptide' waxaa looga faa'iideystaa habka loo yaqaan 'enzymatic hydrolysis' oo bareeg ah oo ka kooban molecule isla markaana keenaya celceliska miisaanka molecular ee ka yar 3000Da sidaas darteedna awood u siineysa jirka aadanaha inuu si fudud u nuugo. Isticmaalka maalin kasta ee kalluunka collagen waxaa lagu caddeeyay inay wax weyn ku kordhinayso maqaarka aadanaha iyadoo la gaabinaayo gabowga.
2 Products Alaabada Daryeelka Caafimaadka
Koolajku wuxuu muhiim u yahay jirka bini'aadamka, oo ay kujiraan laf, muruq, maqaar, jilibyo, iwm. Marka waxaa loo isticmaali karaa alaabada daryeelka caafimaadka si loo dhiso jirka aadanaha.
Nidaamka gabowga maqaarku waa habka luminta kolajka. Kolajka kalluunka waxaa badanaa loo isticmaalaa qurxinta si loo yareeyo habka gabowga.
Burburka Collagen guud ahaan waa sababta ugu weyn ee cudurada dilaaga ah. Maaddaama ay tahay collagen-ka ugu weyn, kalluunka collagen waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa warshadaha dawooyinka.
Heerka Dhoofinta, 20kgs / bac ama 15kgs / bac, bacda poly gudaha iyo bacda kraft dibadda.
Iyada oo santuuqa: 8MT oo santuuqa loogu talagalay 20FCL; 16MT oo sita santuuqa 40FCL
Inta lagu guda jiro gaadiidka, rarka iyo rogista lama oggola; la mid maaha kiimikooyinka sida saliidda iyo qaar ka mid ah baabuurta walxaha sunta leh iyo kuwa carafta leh.
Ku hay weel si adag loo xiray oo nadiif ah.
Waxaa lagu keydiyaa meel qabow, qalalan, hawo leh.
Kalluunka Ugu Fiican
Collagen Miisaanka Kalluunka
Kalluunka Hydrolyzed Collagen